1. Abantu abaningi basebenzise isikhathi eside ukusebenzisa amakhompyutha we-Windows futhi bathola ukuthi iMac inzima ukuyisebenzisa, ungazi ukuthi yini okhiye abashisayo, abajwayelekanga, ababangcono, empeleni, iMac uhlelo oluzinzile lokusebenza. Inesistimu yokuphepha eyaziwa umhlaba wonke okulula ukuyisebenzisa kunalokho ucabanga. Namuhla sizokwethula ukuthi ungazithatha kanjani izithombe-skrini ze-Mac OS, okuyizindlela eziningi futhi ezilula kakhulu.
2. Ukubanjwa kwesikrini esigcwele ngokucindezela ku-Shift + Command + 3 okhiye ngasikhathi sinye.
3. Lapho kuzwakala umsindo we-snap Isithombe-skrini esithunjiwe sizogcinwa kudeskithophu futhi singasetshenziswa lapho kudingeka.
4. Ukubanjwa kwezitshalo okwenziwa ngesandla ngokucindezela okhiye abangu-Shift + Command + 4 ngasikhathi sinye.
5. Uzobona uphawu "+" oluzungeze isikhombisi segundane. Bamba ngokuchofoza kwesobunxele bese uhudula endaweni ofuna ukuyidubula. Bese udedela igundane. Izithombe ozithathile zizogcinwa kudeskithophu.
6. Isibonelo sesithombe esirekhodwe ngesivuno esikhethiwe.
7. Ukubanjwa kwesikrini nokuqoshwa kwesikrini ngokucindezela ku-Shift + Command + 5 okhiye ngasikhathi sinye.
8. Uhlelo luzobonisa imenyu yokubamba ukukhetha njengoba kukhonjisiwe esithombeni.
9. Ukusebenza kwemenyu ngayinye kuhlelwe kusuka kwesobunxele kuye kwesokudla: ● Thwebula sonke isikrini ● Thwebula kuphela iwindi elisebenzayo ● Ukubanjwa kwezitshalo ngesandla ● Qopha yonke ividiyo yesikrini ● Qopha ividiyo yesikrini ekhethiwe. Imanuwali ● Izinketho zokusebenza ezingeziwe ● Inkinobho yokubamba - Thwebula noma Qopha - qala ukuqopha ividiyo. Lapho ukuqoshwa kwevidiyo kuqala, ungayeka ukurekhoda noma kunini ngokuchofoza uphawu luka- “◻” kubha yemenyu ephezulu kwesokudla. Uma uchofoza u-Stop, ividiyo yakho izogcinwa ngokuzenzekelayo ku-Desktop.
10. Nawa amathiphu ambalwa alula okusheshisa izinto ngenkathi iMac yakho ithwebula isikrini. Ukubukwa okuncane kwefayela lesithombe kuzokhonjiswa ekhoneni elingezansi kwesokudla. Ungasebenzisa igundane ukuze uchofoze futhi ubambe esithombeni sokubuka kuqala bese uhudula bese usilahla kuhlelo lwe-LINE noma ama-google amadokhumenti ukudlulisa noma ukuqala kabusha umsebenzi ngokushesha.
11. Kusukela kusibonelo esingenhla, kungabonakala ukuthi abathuthukisi be-Mac OS abanjengo-Apple banaka imininingwane emincane emsebenzini wabo. Ngisho nokuthatha isithombe-skrini ngemisebenzi ehlukahlukene ongakhetha kuyo. Yonga isikhathi esiningi usika izithombe noma amavidiyo. Ungangenisa amafayela adlulisiwe noma asetshenziswe ngokushesha. Kukhona namathiphu awusizo wokusebenzisa iMac OS ukusiza ukwenza umsebenzi wakho ube lula kakhulu futhi usheshe. Chofoza ukuze ulandele iwebhusayithi yethu ukuthola izindaba ezithokozisayo nezindatshana esizobe sizibeka esikhathini esizayo.